Wakiillada Soomaaliya iyo Sucuudiga ee ICO oo kulmay | KEYDMEDIA ONLINE
Wakiillada Soomaaliya iyo Sucuudiga ee ICO oo kulmay
Soomaaliya iyo Sacuudi Carabiya ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iskaashiga ka dhaxeeya labada dal Arbacadii.
RIYADH, Saudi Arabia –Kulan dhex maray wakiilada labada dal u fadhiya Ururka Iskaashiga Islaamka ee OIC ee Cabdirisaaq Saciid Cabdi iyo dhiggiisa Saleh Hamad Al-Suhaibani ayaa looga hadlay in la hagaajiyo madmadow diblumaasiyeed oo soo jiitamayay sanadihii la soo dhafay.
Al-Suhaibani wuxuu sheegay in iskaashiga iyo wadajir dalalka xubnaha ka ah ururka ay ahmiyadda koowaad u tahay Sacuudi Carabiya.
Cabdi ayaa dhankiisa carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay nabad waarta, xasillooni iyo horumar ka dhaca gudaha Soomaaliya, wuxuu sidoo kale ku amaanay Boqortooyada Sucuudiga taageerada bini’aadanimo iyo deeqaha horumarineed ee ay siiso shacabka Soomaaliyeed.
Ururka Iskaashiga Islaamka oo horey u ahaa Ururka Shirka Islaamka, waa urur caalami ah oo la aasaasay 1969, waxaa xubno ka ah 57 dowladood oo ay ku noolyihiin dad kor u dhaafaya 1.8 bilyan.
Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa billaabay in ay raadiyaan waddamadii ay xiriirkooda xumeeyeen markii ay yimaadeen si ay u helaan kalsoonida waddomada xog ogaalka u ah xaaladda Soomaaliya.